Global Aawaj | साउथमा बलिउड अभिनेत्रीको आकर्षण, को कुन फिल्ममा देखिँदैछन् ? साउथमा बलिउड अभिनेत्रीको आकर्षण, को कुन फिल्ममा देखिँदैछन् ?
काठमाडौँ । केही वर्षयता साउथ इन्डियन फिल्महरूको क्रेज बढ्दो छ । विक्रम अभिनित आई, रजनीकान्त अभिनित रोबर्ट, प्रभास अभिनित बाहुबली, यश अभिनित केजीएफलगायतका फिल्मले साउथ इन्डियन फिल्महरूलाई बलिउडसँगै विश्व बजारमा परिचित गरायो । यी फिल्महरू पश्चात बलिउडमा त साउथको दबदबा नै सुरु भयो । बलिउडमा साउथका भइरहेका रीमेकभन्दा पनि साउथकै फिल्महरू डबिङ गरेर प्रदर्शन गर्ने प्रचलन बढ्यो ।